လျှောက်ထားရန် - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်အစီအစဉ်
သငျသညျ3ထဲက4တစ် GPA နိမ့်ဆုံးနဲ့အသိအမှတ်ပြုကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကနေကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက် 3.0-4 တစ်နှစ်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဘာသာရပ်အပိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပျှမ်းမျှအဆင့် ၃.၀ အောက်တွင် software ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ် ဦး အဖြစ်ခိုင်မာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါက (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့အဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိလျှင်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိရန်.
5 ။ ဘွဲ့လွန်စံချိန်တင်စာမေးပွဲ (GRE)
အဆင့် 1: အွန်လိုင်းမှလျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်ပေးပါ ဒီမှာ.
အဆင့် 2.1: ကိုယူ programming ကိုစာမေးပွဲဖြေဆို.
ဒီရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုများအတွက်, သငျသညျကိုအောက်ပါဘာသာစကားများတဦးတည်းအတွက်ကုဒ်ရေးသားဖို့လိုအပ်သည်: Java, C ++, C # သည်, သို့မဟုတ် C ဘာသာစကား။ သင်စမ်းသပ်မလွန်ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျအခြို့သောအချိန်များအတွက် programming ကိုလေ့လာပြီးနောက်သင်၏လျှောက်လွှာကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မီပြန်စမ်းသပ်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နမူနာစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပါ.
2.2: အပေါ်မေတ္တာရပ်ခံအချက်တွေကို Send လျှောက်လွှာစာရင်း သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပါအဝငျ။
အဆင့်လက်ခံရေးအားလုံးသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်သင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်အတွက်က MS မှလက်ခံနိုင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့သောကျောင်းသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒြေတဦးနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်လိမ့်မည်။ သင်အစီအစဉ်ကိုလက်ခံမထားလျှင်, အဆင့်လက်ခံရေးသင်အနာဂတ်၌လက်ခံနိုင်ရန်အတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လိုအပ်ချက်များသိစေပါလိမ့်မယ်။
2.3: တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ် Skype ကိုမှတဆင့်အင်္ဂလိပ်အင်တာဗျူး
အဆင့် 3: လက်ခံပါ။ ပေးထားသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များအဆင့်အထိ
အဆင့် 4: ငွေကြေး Verifiying
လျှောက်လွှာကြေး Submit ။
မှတ်စု: အီဂျစ်, အီသီယိုးပီးနှင့်နီပေါကနေကျောင်းသားများနောက်ဆုံးလက်ခံမှုခွင့်ပြုမီမိမိတို့၏နေအိမ်နိုင်ငံတွေအတွက် Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်သည်။
အဆင့် 5: ငါ-20 & ဗီဇာအဆင့်အတန်း
5.1: ကျနော်တို့ လက်ခံလျှောက်ထားသူမှငါ-20 ပေးပို့ပါ။
5.2: သင်သည်သင်၏အချိန်စာရင်း ဗီဇာ အင်တာဗျူး အမေရိကန်သံရုံးမှာ, သင့်ဗီဇာအင်တာဗျူးတက်ရောက်ရန်နှင့်ဗီဇာရရှိကြသည်။
အဆင့် 6: ခရီးသွားအစီအစဉ်
6.1: အာရဇ် Rapids, အိုင်အိုဝါမှလေယာဉ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။
အဆင့် 7: ကျောင်းဝင်းအပေါ်ဆိုက်ရောက်
ကျောင်းဝင်းအပေါ်သင်ခန်းစာ၏ 8-9 လအတွင်းခံစားပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးနေရာထားရှိရေးစင်တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာတစ်ဦးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတစ်သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) အလုပ်သင်အလုပ်ရှာပါ။
1 ။ တစ်ဦး GPA ကဘာလဲ?
2 ။ ငါက USA ကနေငါမသေးသင့်ရဲ့ program ကို join နိုင်မလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကျောင်းသားအားလုံးနီးပါးသည်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်တိုင်းတွင်အနည်းဆုံး 20 မှမတူညီသောနိုင်ငံများမှကျောင်းသားများရှိခဲ့ပြီး 2800 နိုင်ငံမှ 93 + ဘွဲ့ရများရှိသည်။ ဒီမှာ ကမ္ဘာ့မြေပုံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSCS ဘွဲ့ရများ၏အမျိုးသားရေးဇစ်မြစ်ဖေါ်ပြခြင်း။
3 ။ နိမ့်ဆုံး GPA ကဘာလဲ?
2.7 ထဲက 4.0 နိမ့်ဆုံးတန်းအမှတ်ပျှမ်းမျှ (GPA) ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် GPA အားဖြင့်သင်တို့ကိုလည်းလက်ခံတချို့ပရိုဂရမ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလိုအပ်လိမ့်မယ်။
2.7 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦး GPA အားဖြင့်သင်တို့ကိုပါ GRE ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS အစီအစဉ်ဝန်ခံချက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေအတွက်အပိုင်းအနည်းဆုံး 70% (158) ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
4 ။ လက်ခံမှုများအတွက်ဒီဂရီလိုအပ်ချက်ကဘာလဲ?
တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ် GPA နှင့်အတူကွန်ပျူတာသိပ္ပံသို့မဟုတ် related နယ်ပယ်များတွင်ထားရှိခြင်းသည်အနည်းဆုံး3နှစ်ဘွဲ့ဘွဲ့တစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင် ပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ.
5 ။ ဝန်ခံချက်များအတွက်အလုပ်လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ?
A လေးနှစ်ဒီဂရီ ဘွဲ့ရလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ programming6လနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက သုံးနှစ်ဒီဂရီ ဘွဲ့ရလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ programming 2-3 နှစ်ပေါင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
6 ။ ငါသေးအကြှနျုပျ၏ဘွဲ့ဘွဲ့ပြီးဆုံးပြီမဟုတ်။ ငါနေဆဲလျှောက်ထားလို့ရမလား?
7 ။ ငါအွန်လိုင်းကဒီဘွဲ့ယူနိုင်သလား?
ဝမ်းနည်းပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ။ Program ကိုကြာချိန်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လတစ်ဦးသင်တန်းယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်လေ့လာနေ 8-9 လအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ3လအထိများအတွက်အလုပ်သင်ပေးဆောင်နေတဲ့သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) ကိုရှာတွေ့အတှကျပွငျဆငျရနျကြှနျုပျတို့၏ HR ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတစ်ဦး 24-ရက်သတ္တပတ်အလုပ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတာ။
သငျသညျ 31-12 လလောက်ကျောင်းကိုအချိန်ပြည့်သွားပါနှင့်ရှေ့သို့အပြည့်အဝငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ချင်မဟုတ်လျှင်နိုင်ငံတကာအတွက်စုစုပေါင်း MSCS အစီအစဉ်ကိုအချိန်, 13 လအတွင်းန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Intern များကိုစဉ်အတွင်း, ကျောင်းသားများညနေခင်းနှင့်တနင်္ဂနွေလေ့လာနေ, အကွာအဝေးပညာရေးမှတဆင့်မှာအနည်းဆုံး4သင်တန်းများအခြိနျပိုငျးယူပါ။ (တစ်ခုချင်းစီကိုအကွာအဝေးသင်တန်းပြီးမြောက်ရန်နှင့် ပတ်သက်. လေးလကြာပါတယ်။ )
8 ။ ဤအစီအစဉ်ပြီးသွားချိန်ငါဒီဂရီဘယ်လိုရကြလိမ့်မည်နည်း
9 ။ ဒီက MS အစီအစဉ်၏အရှည်ကဘာလဲ?
ဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုယခုရှိပါတယ် program ကိုရှေးခယျြစရာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏က MS သည်။
ဒါဟာပုံမှန်အားကျောင်းဝင်းလေ့လာမှုအပေါ် 31-1 လအတွင်းနှင့်အတူ, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏က MS ၏ Track 8 ဖြည့်စွက်ဖို့အကြောင်း9လအတွင်းကြာပါသည်။
track2ပိုကြီးတဲ့ကနဦးငွေပေးချေမှုလိုအပ်သော်လည်းလျော့နည်းခြုံငုံအချိန်ဒီဂရီဝင်ငွေရန်။
track3optional ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူ 12-13 လကြာ On-ကျောင်းဝင်းအချိန်ပြည့်လေ့လာမှုလိုအပ်တယ်, အစအဦး၌အပြည့်အဝအစီအစဉ်ကိုငွေပေးချေမှုလိုအပ်သည်။
10 ။ သငျသညျ, အိုင်တီအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်သို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ပူဇော်ပါသလား
ဝမ်းနည်းပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ။ ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့သာရှိသည်, နှင့်အာရုံစိုက်ဆော့ဖျဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, ကို web applications များသို့မဟုတ် ဒေတာသိပ္ပံ (အသစ်) ။
11 ။ ငါနေ C, C ++, C # သည်သို့မဟုတ်ဂျာဗားနှင့်အတူ program ကိုမည်သို့မသိရပါဘူး။ ဤအစီအစဉ်ကိုငါရထိုက်ခွင့် Am?
ဝမ်းနည်းပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ။ ဒီအထူးအစီအစဉ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်နိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်အခြားလျှောက်လွှာအပြင်, ထို programming ဘာသာစကားအနည်းဆုံးတစ်ခုအတွက်အသိပညာအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရန်လိုအပ်ပါတယ် လိုအပ်ချက်များ.
ဂျာဗားဟာက MS ပရိုဂရမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းသင်ကြားမှု language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာဗားသူတို့ရဲ့အချို့ကိုသိခိုင်ခံ့စေလိုသောလျှောက်ထားအွန်လိုင်းမှ Oracle က Java ကိုလက်မှတ်ဝင်ငွေချင်ပေမည်။ ကို click ပေးပါ ဒီမှာ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။ ကျနော်တို့ SE8 သို့မဟုတ် SE9 သင်တန်းအကြံပြုပါသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖကို C # လက်မှတ်များလည်းတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်။
12 ။ ဤအစီအစဉ်ပူးပေါင်းတစ်ခုအသက်အရွယ်ကန့်သတ်ရှိပါသလား?
မရှိအသက်အရွယ်ကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, C, C ++, C # သည်, သို့မဟုတ်ဂျာဗားနှင့်အတူလက်ရှိအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။
13 ။ သင်သည်အခြားနိုင်ငံများတွင်ဘဏ်ခွဲကျောင်းဝင်းရှိပါသလား
ဝမ်းနည်းပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်ကိုသာတည်ရှိပါသည် အမေရိကန်
14 ။ ငါအဘယ်သို့ပြုနိုင်တစ်ခုဘွဲ့ကြိုပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာနေပါတယ်?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်သို့သွားရောက် ကျေးဇူးပြု. က်ဘ်ဆိုက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုရန်။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွဲ့ဘွဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာ။ ယင်းကို click ပေးပါ တောင်းဆိုမှုအင်ဖို> အဆိုပါ BS အစီအစဉ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ခလုတ်ကို။
15 ။ TOEFL Is သို့မဟုတ်ဤအစီအစဉ်အတွက်တစ်ဦးလိုအပ်ချက် IELTS?
အမှတ်ကျနော်တို့အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်ရန်တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ် skype ကတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးများကိုအသုံးပြုပါ။ လိုအပ်လျှင်, ငါတို့သည်အင်္ဂလိပ်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့စကားပြောသင်တို့၏အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲများရှိသည်။ မည်သည့်ပြင်ပမှာအင်္ဂလိပ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်မလိုအပ်ရှိပါသည်။
16 ။ အဆိုပါဘွဲ့လွန်စံချိန်တင်စာမေးပွဲ (GRE) လိုအပ်ပါသလား?
အဘယ်သူမျှမ, သင့် GPA 2.7 ထဲက 4.0 ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်အောက်မရမဟုတ်လျှင်။ သင့်ရဲ့ GPA ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်, ကျနော်တို့ပါ GRE ယူမှသင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ 2.7 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦး GPA အားဖြင့်သင်တို့ကိုပါ GRE ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS အစီအစဉ်ဝန်ခံချက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေအတွက်အပိုင်းအနည်းဆုံး 70% (158) ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, ပေးပါ။
မှတ်ချက်: GRE ကနေအားလုံးလျှောက်ထားခြင်းမှလိုအပ်ပါသည် အိႏၵိယ နှင့် အီရန်သူတို့ကအခပေးကြေးစားပရိုဂရမ်းမင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံ၏2နှစ်သို့မဟုတ်ပိုရှိသည်, သူတို့၏ GPA 3.0 (ခပျှမ်းမျှ) အထက်တွင်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်။
အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်လျှောက်ထားမှုအတွက်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါ GRE ယူရန်သင့်အားအားပေးပေမယ့်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး GRE ရမှတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကိုကျောင်းအပ်အပေါ်သို့ပေးဆောင်ဖို့တောင်းနေကြသည်ကနဦးပမာဏကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ပါ GRE ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ကျောင်းသားတစ်ဦးဗီဇာရယူ International ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ တစ်ဦးက GRE ရမှတ်သင့်ရဲ့အလုံးစုံအစွမ်းသတ္တိကိုညွှန်ပြရန်ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပါလျှင်ပင်, ကသင့်လျှောက်လွှာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
17 ။ အကြှနျုပျ၏ GPA 2.7 ထက်လျော့နည်းသည်။ ငါနေဆဲသင့်ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခွင့်အလမ်းရှိသလား
သင့်ရဲ့အနိမ့် GPA ကိုထေမိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ GRE ယူအပေါင်းတို့နှင့်ကဏ္ဍများအတွက်မြင့်မားသောဂိုးသွင်း, အထူးသဖြင့်အရေအတွက်အပိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်က GRE ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS အစီအစဉ်ဝန်ခံချက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေအတွက်အပိုင်းအနည်းဆုံး 70% (158) ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
18 ။ ငါဘယ်လိုသင့်ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်သလဲ
သင်ဤမှာအွန်လိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် လင့်ခ်. သငျသညျအပလီကေးဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်မှတ်တမ်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
19 ။ ငါ့ကိုလျှောက်ထားရန်အဘို့အဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
20 ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအလုပ်တစ်ခုပေးနိုင်သလား?
ကျနော်တို့အနေနဲ့များမှာ အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ် 24 လအထိတစ်ဦးလိုအပ်သည့်လက်တွေ့ကျသောလေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်နှင့်အတူကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မာစတာဘွဲ့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ကျနော်တို့ပြင်ဆင်နေနှင့်အမေရိကန်အတွက်မဆိုကုမ္ပဏီအတွက်သင့်အခပေးအလုပ်အလုပ်သင်များအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်တကွသင်ကူညီပေးသည်။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်သင်ငှားရမ်းကြပါဘူး။
On-ကျောင်းဝင်းလေ့လာနေနေစဉ်, ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ classwork အပေါ်အချိန်ပြည့်အာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်, ဒါကြောင့်ဒီကာလအတွင်းအခြိနျပိုငျးအလုပ်အကိုင်အဘို့အဘယ်သူမျှမအချိန်လည်းရှိ၏။
21 ။ ငါတစ်နှစ်အကြာတွင်ဤအစီအစဉ် join ချင်တယ်ယခုငါလျှောက်ထားရမလဲ?
သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့် entry ကိုနေ့စွဲမတိုင်မီ 12 လအထိလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင်ဤအစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါလိမ့်မယ်လျှင်ထွက်ရှာလိုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့သင်ကကြိုတင် 12 လလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါပြန်လည်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ, ဧပြီ, သြဂုတ်လသို့မဟုတ်အောက်တိုဘာလ၌အကြှနျုပျတို့၏ MSCS အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းလိမ့်မည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် Permant နေထိုင်သူများသာဖေဖော်ဝါရီလသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအတွင်းကကျောင်းအပ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
22 ။ သငျသညျနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘယ် entries တွေကိုပူဇော်သလဲ?
ဖေဖော်ဝါရီလ, မေလ, သြဂုတ်လနှင့်နိုဝင်ဘာလ: ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်တစ်နှစ်လျှင်လေး entries တွေကိုရှိသည်။ လျှောက်လွှာနှင့်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ် 2-3 လအတွင်းခွင့်ပြုပေးပါ။ အမေရိကန်ကျောင်းသားများအသာ, ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်သြဂုတ်လများတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
23 ။ အကြှနျုပျ၏အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်လိုသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လုံလောက်သောကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကအခြားဘာသာစကားများကိုအသုံးရနိုင်မလား?
အဘယ်သူမျှမ, စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဤအစီအစဉ်ပူးပေါင်းနိုင်ရန်အတွက်သင်ရေးသားစကားပြောနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့နားထောင်ခြင်းတစ်ခုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အထိရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုမကျင့်လျှင်, သင်လျှောက်ထားရှေ့၌သင်တို့အင်္ဂလိပ်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
24 ။ အကြှနျုပျ၏မှတ်တမ်းငါဘာလုပ်သင့်တယ်, အင်္ဂလိပ်အတွက်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
သင်ကအွန်လိုင်းလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်း, သင်သည်သင်၏ဘွဲ့ဘွဲ့အတွက်သိမ်းယူထားသောသင်တန်းများ၏ non-အရာရှိတဦးကဘာသာပြန်ချက်များကိုပေးစွမ်းဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုမှနောက်ဆုံးလက်ခံမှုပေးသနားတော်မူနိုင်မီငါတို့သည်သင်တို့၏မှတ်တမ်း၏တာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာပြန်ကိုလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ပေမည်။
25 ။ ဗီဇာဘယ်ကြင်နာငါသည်သင်တို့၏တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်ရဖို့လိုအပ်သလဲ?
တစ်ဦး F1 ကျောင်းသားဗီဇာလိုအပ်ပါသည်။ ကျောင်းသားဗီဇာနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များအဘို့, ကြည့်ရှု ပြည်နယ်က်ဘ်ဆိုက်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန.
မှီခိုသည့် F-2 ဗီဇာရတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ကိုနှိပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ.
26 ။ သင်ဗီဇာနှင့်ငါ့ကိုပေးနိုင်သလား?
ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်တွင်သင်သည်ကူညီ။ သငျသညျအပေါငျးတို့သဝန်ခံချက်များနှင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်နှင့်ပရိုဂရမ်မှနောက်ဆုံးလက်ခံမှုခွင့်ပြုခဲ့ပြီပြီးနောက်ကျနော်တို့အနေနဲ့ငါ-20 ပုံစံအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင်အနေနဲ့လျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည် F1 ကျောင်းသားဗီဇာ သင်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်တွင်အမေရိကန်သံရုံးမှာ။
27 ။ ငါကျောင်းဝင်းအပေါ်မှာငါ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းအခန်းထဲမှာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်ဆပ်ဖို့ရှိပါသလား?
ကနဦးအဘယ်သူမျှမ။ သင်သည်သင်၏အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အစားအစာကုန်ကျစရိတ်များအတွက်-ပေးဆောင် pre မှမရှိကြပါဘူး။ သူများသည်ကုန်ကျစရိတ်အဓိကအားသင်သည်သင်၏ပေးဆောင်အလုပ်သင်အနေနဲ့ဝင်ငွေအောင်စတင်ခဲ့ကြပြီးနောက်စတင်ကြောင်းကိုသင်၏ဘဏ်ချေးငွေအားဖြင့်ပေးချေကြောင်းသင့်ရဲ့အလုံးစုံအစီအစဉ်ကိုကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
28 ။ ငါသည်ငါ့ On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား?
ဝမ်းနည်းပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ။ သင့်ရဲ့ On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများစဉ်အတွင်း, သင်လေ့လာနေအပေါ်သာအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
29 ။ သငျသညျကိုအမေရိကန်ငါ့နယ်လှည့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးဆောင်ကြမည်နည်း
30 ။ သင်ဤအစီအစဉ်၏ကနဦးငွေပေးချေမှုများအတွက်ငါ့ကိုစပွန်ဆာနိုင်သူမည်သူမဆိုကိုသိသလား?
တစ်ဦးစပွန်ဆာရှာတွေ့သင့်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအကူအညီအတွက်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုမေးလို့ရပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအမေရိကန်ဘဏ်ထံမှရထိုက်ခွင့်နှင့်ပူးတွဲလက်မှတ်ထိုးငွေချေးဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးကအမေရိကန်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသိလျှင်, သင်ထားတဲ့များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေခြင်းငှါ, အခြားရွေးချယ်စရာချေးငွေ.
31 ။ သငျသညျပညာသင်ဆုရှိပါသလား
အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအမှန်တကယ်တစ်ပညာသင်ဆုထက် သာ. ကောင်း၏။ အနိမ့်ကနဦးကုန်ကျစရိတ်, ဘဏ်ချေးငွေကျနော်တို့စီစဉ်ကူညီခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားစတင်ရန် $ 75,000 မှ $ 80,000 တစ်နှစ်ဝင်ငွေကြောင့်အလုပ်သင်ပေးဆောင်။ အဆိုပါချေးငွေကိုအလွယ်တကူကြိုတင်ကျောင်းဆင်းပွဲမှဆပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကမပို 1000 months ago ထက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်လျှင်, GRE (ဘွဲ့လွန်စံချိန်တင်စာမေးပွဲ) ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုများ၏အရေအတွက်အပိုင်းအပေါ်အနည်းဆုံး 90% ဂိုးသွင်းတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီမှ $ 24 ပညာသင်ဆုကိုဆက်ကပ်။
32 ။ တစ်ဦးအလုပ်သင်တွေကိုရှာတွေ့ဖို့ငါ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဘာတွေလဲ?
သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအလွန်ကောင်းနေတယ်။ ကျနော်တို့ pre-select လုပ်ပါကျနော်တို့အမေရိကန်လက်တွေ့ကျလေ့ကျင့်ရေးဈေးကွက်ထဲမှာကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်ထင်သူအစီအစဉ်အတွက်ကျောင်းသားများကို။ သင်သည်သင်၏နောက်ခံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစနစ်တကျကိုယ်စားပြုကြပါပြီ, သင်ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည် (တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အင်္ဂလိပ်ပြောပြီ) ရှိသည်ဆိုပါက, သင်ဒီနေ့ရဲ့အိုင်တီဈေးကွက်ထဲမှာကောင်းမွန်စွာပြုကြလိမ့်မည်။ အကယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်သင်ကျောင်းသားများအတွက်လက်ရှိနေရာချထားနှုန်းထားများ 98% 99 မှဖြစ်ကြသည်။
33 ။ လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကို (CPT / Opt) အတွက်ရွေးချယ်စရာဘာတွေလဲ?
သင်သည်သင်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်၏အလုပ်သင်အဘို့ကိုစတင်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းသား CPT (သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း) ဗီဇာအစီအစဉ်ကိုသင်တစ်ဦးနှင့်အတူ (ဒီကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ CPT အနေအထားကစတင်ခဲ့သည်ကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာပေါ်တွင်မူတည်သည်) US မှာ CPT Intern များကိုလုပ်နေတာနှစ်နှစ်အထိခွင့်ပြု အထူးလမ်းကြောင်းအပေါ်တဦးတည်းကိုပိုပြီးတနှစ်အဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ extension ကို။ ဤသည် CPT အပေါ်3နှစ်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးစုစုပေါင်းဆိုလိုသည်။
အခြားရွေးချယ်စရာ Opt (Optional လက်တွေ့သင်တန်း) လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Opt ဘို့အတည်ပြုခံရဖို့အလို့ငှာ, ကျောင်းသားများအားလုံးကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့် CPT ၏ထက်နည်းတစ်နှစ်ပွုပါပွီ။ သူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုပြီးစီးကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ထို့နောက်ကျောင်းသားများက stem extension ကိုပိုမို Opt ၏တစ်နှစ်အရည်အချင်းပြည့်မီပေါင်း2နှစ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့4နှစ်ပေါင်းစုစုပေါင်း။ ပိုမိုသိရှိရန် ဒီမှာ.
34 ။ ကျွန်မတစ်ဦး CPT အလုပ်သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များချေးငွေထုတ်ယူရန်လိုအပ်သလား
သင်အငြိမ့်နထေိုငျနှငျ့သငျ့ချေးငွေအပေါ်ငွေပေးချေမှုလုပ်ဖို့လုံလောက်ချေတဲ့သင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင် secure သည်အထိအမှတ်အဆိုပါကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များချေးငွေယူမပေးပါ။
35 ။ အဆိုပါ MSCS ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များကိုဘာတွေလဲ?
ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့မြင် ကျေးဇူးပြု. ဒီမှာ.
36 ။ ငါအမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦးကိုပူးတွဲလက်မှတ်ထိုးသူရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်အဘယ်သို့နည်း,
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားအဘယ်သူမျှမ Co-လက်မှတ်ထိုးသူရှိပါတယ်လျှင်သင်ကျောင်းအပ်အပေါ်သို့ကျိုးနွံငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုသငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီသောဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ၏အဆင့်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ program ကိုကုန်ကျစရိတ်၏ချိန်ခွင်လျှာထို့နောက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များချေးငွေကတဆင့်ပေးဆောင်သည်:
ပဋိညာဉ်စာတမ်းတစ်ခုမှာ (အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ cosigner)
နိုင်ငံသားဘဏ် (အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ cosigner)
Discover (အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ cosigner)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းတစ်ခုမှာ (mum ကျောင်းသားနှင့်အတူချေးငွေများ cosigns) ဖတ်ရှုပါ ဖွင့်လှစ်ခြင်း.
Navient (Sally မဲ) (အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ cosigner)
ပင်တဂွန် FCU (အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ cosigner)
ရေတွင်းများတဖက် (အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ cosigner)
သငျသညျအထကျစာရင်းထဲကကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, mum ဒေသခံတစ်ဦးကဘဏ်နဲ့ဘဏ်ချေးငွေ၏အာမခံသည်။ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: mum ဒီအစီအစဉ်ကနေအဘယ်သူမျှမအကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်အားသာချက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်သင်သင်ဤသမိုင်းဆိုင်ရာစာရင်းတွင်ငွေချေးမဟုတ်အပါအဝင်ဆန္ဒရှိမည်သည့်ငွေစုငွေချေးကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။
37 ။ သင့်ရဲ့က MS အစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားရန် 13 ဂရိတ်အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲ
mum USA တွင် Software Development, Web ကို Applications ကိုများနှင့်ဗိသုကာပညာနှင့်ဒေတာများသိပ္ပံများတွင်အများဆုံး, ထူးခြားတဲ့တတ်နိုင်နှင့်အောင်မြင်သောသခင်၏အစီအစဉ်များကိုတဦးပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ 2800 + လက်ရှိစာရင်းသွင်း 93 နှင့် 1996 MSCS ကျောင်းသားများကိုကတည်းက 1000 နိုင်ငံတွေထဲကနေဘွဲ့ရရှိသည်။
* တစ်ခုမှာအနိမ့်ကနဦးငွေပေးချေမှုကျောင်းဝင်းအပေါ် 8 လအတွင်းအားလုံးကိုပညာရေး, အိုးအိမ်, အော်ဂဲနစ်ထမင်းစားခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံစရိတ်များဖုံးလွှမ်း။
တွေ့ကြုံ, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့, Multi-အမျိုးသားရေးဒြေအိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကျောင်းသားတွေဟာကိုပွငျဆငျ။
ဘေးကင်းလုံခြုံ, ဖော်ရွေ, မိသားစု-ကဲ့သို့၎င်း, ကွဲပြားခြားနားနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်း။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုကြည့်ပါ ဘလော့ဂ်.)
* ကွန်ပြူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေးရေးစင်တာဝန်ထမ်း paid လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုတည်နေရာအတွက်အောင်မြင်မှုအဘို့အကျောင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင်လော့။ တစ်နှစ်လျှင် $ 98 ပျမ်းမျှလစာနှင့်အတူ 99-80,000% အလုပ်သင်နေရာချထားအောင်မြင်မှုနှုန်းသည်။
ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးပေးဆောင်လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်ရယူပြီးတာနဲ့ * တက္ကသိုလ်အစီအစဉ်ကိုကုန်ကျစရိတ်၏ချိန်ခွင်လျှာများအတွက်ချေးငွေရရှိအတွက်အထောက်အပံ့များနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအငြိမ့်လစာကနေကြိုတင်ဘွဲ့ရမှချေးငွေပြန်ဆပ်။
အားလုံးသင်တန်းများကျောင်းသားများကိုလကအချိန်ပြည့်နှုန်းတဦးတည်းသင်တန်းလေ့လာရှိရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်, အပေါ်ဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုစည်းကမ်း, စိတ်စိတ်အမွှာမွှာသင်တန်းဝန်ထံမှလွတ်လပ်ခွင့်များနှင့်အဆုံး-of စာသင်စာမေးပွဲတွင်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဖျက်သိမ်းရေးအပေါ်နက်ရှိုင်းသောအာရုံခွင့်ပြုပါတယ်။
မှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင် "နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမန်နေဂျာသင်တန်းများအတွက်ခေါင်းဆောင်မှု။ "
အဆိုပါကျောင်းဝင်းအမေရိကတိုက်၏ဗဟို၌ 365 လှပသောဧက (မနီးမဝေးချီကာဂိုမှ) အပေါ်အလွန်ဆွဲဆောင်မှု, ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျောင်းသားအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးကျောင်းသားများအရိုးရှင်းတဲ့, သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးအတည်ပြုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားတိုးပွားလာဘို့ technique ကို, တီထွင်ဖန်တီးမှု, စွမ်းအင်, အလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖျက်သိမ်းရေးသင်ယူကြသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်မျှပညာရေးကြွေးမြီ၏2နှစ်တက်ပြီးနောက်ဘွဲ့ရ။
38 ။ အမေရိကန်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSCS အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းကိုသိရန်အဘယ်အရာသတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သလဲ?
များသောအားဖြင့် (FAFSA တင်ပြပြီးနောက်) ကိုအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားချေးငွေများများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနေကြတယ်
Program ကိုများသောအားဖြင့်ကျောင်းဝင်းအပေါ် 12-13 လအတွင်းကြာပါသည်။
အလုပ်သင်အထိ 8 လအတွင်းလိုအပ်ပေမယ့်ရွေးချယ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်